Impi yamazwi kuZimdollar nensizwa ebigunda igceke - Ilanga News
Home Izindaba Impi yamazwi kuZimdollar nensizwa ebigunda igceke
Impi yamazwi kuZimdollar nensizwa ebigunda igceke
Kuvela ukuthi babanga inkokhelo ka-R1 300
Yigceke eligundwe nguMnu Mpungose.
UTHOLANE phezulu ngempi yamazwi nowesilisa obalisa ngesikweletu sika-R1 300 umsakazi wokhozi FM, uZimiphi “Zimdollar” Biyela.
Kunenkulumo eqoshiwe phakathi kwale ntandokazi yomsakazi wohlelo lomculo wesintu, uSigiya Ngengoma oludlala njalo ngo-Mgqibelo ngo-09:00 -12:00 emini kulo msakazo noMnu Sibusiso Mpungose osola uZimdollar ngokugweva nemali yakhe emuva kokumgundela igceke emzini wakhe oseShowe.
UMnu Mpungose okhulume ne-LANGA edinwe eqhuma ngesenzo athi senziwe uZimdollar, uthe kulo R1 300 ukhokhela imoto emhambisayo, abantu asebenza nabo abaqoqa udoti besekuba yimali yokuboleka umshini.
“Akwenze kimina kubuhlungu ngoba nakhu ngisebenzela emakhaya yena eseThekwini. Ngagunda utshani emzini wakhe emasontweni amathathu edlule. ngesikhathi efika yena, utshani basebukhulile wathi kayikho into engiyenzile,” kusho uMnu Mpungose.
Uthi wazama ukumchazela ukuthi imvula beyina ngakho-ke utshani sebukhulile kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Okungiphoxe kakhulu wukuthi wangithumelela umyalezo othi ngiyagula ngeke ayikhokhe yena leyo mali,” kusho yena.
Uthi emuva kokuthola lowo mlayezo, akabange esaqhubeka nokufonela uZimdollar ngoba waphoxeka ngenxa yokuthi wayengakulindele lokhu kumuntu amhlonipha njengalo msakazi.
Uthi bake basebenzisana noZimdollar futhi wawuthanda umsebenzi wakhe. “Phambilini ubengangihluphi, ubengikhokhela kahle, kulokhu uqale wathi uzokhokha u-R1 200 kuphela kodwa wagcina engakhokhanga ngisho indibilishi le,” kusho uMnu Mpungose.
ILANGA liyizwile inkulumo ka-Zimdollar eqoshiwe, etshela uMnu Mpungose ukuthi makakhohlwe, ngeke ayithole le mali. UZimdollar naye obedinwe egane unwabu ngesikhathi ILANGA limthinta ngalolu daba, uthe: “(UMnu Mpungose) kumele afunde ukukhuluma kuqala ukuze sizwane. Imali nginayo impela kodwa uma esahluleka wukukhuluma ngeke ayithole.”
Uqhube ngokuthi uMnu Mpungose uyamehlula umsebenzi wakhe bese ejaha imali.
“Ukhuluma kanjena nje, mina kangimbizanga ukuyogunda utshani, yena wafona wathi uzodlula ekhaya ayogunda njengoba wayegcine mhla ka-21 kuZibandlela (December), manje mina ngazitshela ukuthi uzolungisa amaphutha, yingakho ngithi kumele afunde ukukhuluma,” kusho uZimdollar.
Utshele ILANGA ukuthi uMnu Mpungose kumele acele noma uhhafu wenkokhelo ngoba vele wayengaqashiwe ukuyogunda utshani ngalelo langa.
Previous articleUmsindo ngokuvula kothisha
Next articleUHunt ukhathazekile ngeBucs